गैर कानुनी काम गर्नेदेखि सावधान ! « Dainiki
२ जेठ, काठमाडाैँ । कसैले चलेको कम्पनीको नाम लिएर कुनै काम गरिदिन्छु भन्यो भने तपाईंमा तत्कालै विश्वास गर्ने बानी त छैन ? यदी यस्तो गर्नुभएको भए सावधान हुनुहोस् र कुनै कम्पनीको कर्मचारी बनेर सेवा उपलब्ध गराउँछु भन्ने मान्छे यकिन नगरी उसलाई काम नदिनुहोस् । त्यस्ता व्यक्ति सम्बन्धित कम्पनीको कर्मचारी हो या होइन पहिले प्रष्ट भएर मात्र काम लगाउनुहोस् । नत्र ठगिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले सक्कली सुन भनेर नक्कली सुन दिने सक्कली पैसा भनेर नक्कली पैसा दिने गिरोहसमेत सक्रिय भएकाले यसतर्फसमेत सचेत हुन सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १६:३३
२ भदाै, बुटवल । ११ वर्षकी भतिजी बलाल्कार गर्ने ठुलाेबा पक्राउ परेका छन् । नवलपरासीमा
२ भदाै, काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस लिएको आरोपमा
२ भदौ, काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याका कारण बनेका न्यूज २४ टेलिभिजनका प्रस्तोता रवि
२ भदौ, काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्